Usebenzisa iiNkampani zeShelf ezindala kunye neenkampani ezalupheleyo ezinamaLungelo okuthenga ngetyala
Nanku umzekelo ongumzekelo wendlela iAged Corporation kunye neNkqubo yokuHlala ngeMali eQhelekileyo esebenza ngayo kunye nendlela ezimbini zabathengi bethu abazisebenzisayo ukuthenga inkampani ethengisa izindlu nomhlaba. Uya kubona imifanekiso yeyona projekthi ingezantsi. (QAPHELA: Le yinkxaso mali yokuthenga izindlu nomhlaba kwaye ayisiwo umgca wetyala.)
Hlala ukhumbula ukuba ayisiyiyo kwaphela indlela enokusetyenziswa ngokuthenga ngetyala. Lo ngumzekelo omnye weendlela ezininzi ezinokwenzeka. Kwakhona, hlala ukhumbula ukuba inyathelo-nyathelo-ngalinye kukukhokela kunye namagama ezinto zakho ezibhaliweyo, kunye neenkcukacha zigutyungelwe kwizifundo zoqeqesho ezibandakanyiweyo kumashalofu ezinkampani ngenkqubo yokunceda ngemali kwipropathi.
Qaphela: Zilumkele imibutho kule mihla nakwiminyaka ethi ungafumana inkampani esele inemigca yokuthenga ngetyala ehambelana nayo. Ukuba ufuna ukufumana inkampani endala, sinike umnxeba. Emva kokuba uyifumene kuthi singakunceda ukuba wakhe ikhredithi kuyo.
SICELA UQAPHELE: Sineenkqubo ezintsha endaweni yale nto sakha kuyo iiprofayili zeshishini kwaye sikuncede ngokwakha ikhredithi yeshishini ukuze uvule indawo yakho yokuthenga ngetyala. Imo yokubolekisa sele itshintshile ukuze singaboneleli ngenkqubo ngokuthe ngqo njengoko kuchaziwe apha. Olu lwazi lungezantsi luyindibaniselwano yolwazi lomntu kunye nolwazi oluvela kubathathi-nxaxheba kwiprojekthi.
Ababini kubathengi bethu eTacoma, eWashington, umyeni nenkosikazi egama linguDwayne kunye noJanet Anderson, babefuna ukuthenga umhlaba, bakhe izindlu ezimbini, bathengise izindlu ngenzuzo. Emva kokufumana inkampani kuthi baye kwiikhosi zoqeqesho ezifanayo esibonelela ngazo malunga nokusebenzisa umgca wetyala labo.
Emva koko benze umnikelo kwiqashiso ezimbini ngeedola i-125,000 kwisiqwengana esixhaswe ngemali mboleko yomanyano. Isifundo soqeqesho esihamba kunye nenkampani yakho nenkqubo yokunceda ngetyala siza kukufundisa ukuba uDwayne noJanet bakwazile njani ukuthenga umhlaba uxhaswe ngemali yinkqubo yemboleko yekhampani kungakhange kubekho nto iphuma ezipokothweni zabo.
Okwenziweyo Umfanekiso wokwakha uninzi lwabathengi bethu, iDwayne kunye noJanet, abathe bafumana besebenzisa inkqubo yokuthenga ngetyala.
Imali mboleko yokwakha sincede uDwayne noJanet bafumana ukubeka imali epokothweni xa bethenga umhlaba. Ke, imali kwityala esilincedileyo ukuba liyifumane ihlawulwa ukuze kuthengwe umhlaba kwaye ngaphezulu kuthengiswa njengoko kuqhubeka iprojekthi.
UDwayne kunye noJanet akufuneki benze ntlawulo de kuthengiswe impahla. Akukho mfuneko yokuba bahlawule inzala kuyo yonke imali mboleko. Kufuneka bahlawule nje isixa semali ebolekayo. Ngenxa yesidima sethu, imo yezemali kunye namava, sinamalungiselelo kunye nababolekisi abathi, ngokungafani neebhanki, baxhase iprojekthi yonke ngaphandle kwemali epokothweni. (Ngokwendalo, ukuba neshishini lokuthengisa izinto eselufini ayisiyomfuneko yodwa yokufumana imali mboleko. Ixabiso lepropathi exhanyiweyo kunye nokusebenza kakuhle kweprojekthi kudlala indima ebaluleke ngakumbi.)
Kule meko, xa bathenga umhlaba, abaabolekisi babaneemali ezihlawulelyo ukuhlawula umthengisi womhlaba kunye nemali ethe kratya ukuya kwiipakethe zikaDwayne noJanet. Uya kufunda obu buchule kwikhosi yoqeqesho, indlela yokubhala enikezelwayo kunye nalapho ufumana khona izivumelwano. Kwakhona, iDwayne kunye neJanet akufuneki zenze ntlawulo nakweyiphi na indlu de impahla ithengise.
Inkqubo yeNtengo yeMboleko kunye nobume besibonelelo sakwazi ukuxhasa ngemali ngokwaneleyo ukuthenga umhlaba kunye ne- $ 25,000 ngeqashiso ngalinye langena kwiipakethi zikaDwayne kunye noJanet. Kuba bathenga iipropathi ezimbini ngexesha elinye, kuthiwa banakho ukupakisha malunga ne- $ 50,000 phezulu. Uya kufunda ukuba bayenze njani kwikhosi ehamba kunye.
Nje ukuba zifunyanwe imvume, ezifundiswa zezifundo zethu, safumana uDwayne noJanet umakhi. Umbolekisi uhambisa umzobo wokuqala (intlawulo) kumakhi. Okwangoku, iprojekthi ixhaswe ngokupheleleyo yimali etyaliweyo kwaye akukho mali iphumeyo kwiipakethi zikaDwayne noJanet. UDwayne kunye noJanet akufunekanga bazi ukuba bayayakha njani indlu. Babengenamava ekwakheni. Balandela nje ikhosi yethu yoqeqesho emva koko baqesha umakhi esabafumanela. Ukongeza, abaphuhlisi abasisigxina abanamava amashumi eminyaka baye banakho ukuxhamla ekusebenziseni inkqubo yethu.
Okwenziweyo UMdaniso weNdlu yoLwakhiwo oluPhakathi lweNdlu Ababolekisi baMatyala beZiko lethu baxhaswa ngezimali eDwayne naseJanet
Emva kokuba igqityiwe ukubiyelwa indlu, obolekayo uhambisa imali ethe xaxa kumakhi ukusuka kumda wabo wokuthenga ngetyala.
Emva kokuba uphahla lufakiwe kwaye isivingti sigqityiwe, umzobo wokugqibela uhlawulwa ngumnxeba wekhredithi owamkelwe kwangaphambili ukuze ugqibe umsebenzi wokupeyinta.Ukugqitywa kolwakhiwo ogqityiweyo lwaBathengi bethu Dwayne kunye neNdlu kaJanet (Ngexesha lokuHlalwa komhlaba)
Ngoku impahla igqityiwe. Ixabiso lentengiso liza nge $ 385,000.
Ixabiso eliqikelelweyo leprojekthi le lilandelayo:
a. I- $ 125,000 yokuthenga umhlaba -ixhaswe ngemali epheleleyo ngumbolekisi kunye nokuxhasa ngemali umthengisi.
b. I- $ 25,000 eyongezelelweyo yokubolekwa kwemali-mboleko eyangena kwiipokotho zeDwayne kunye noJanet ngaphambili xa uthenga umhlaba.
c. I- $ 99,000 ekwakheni iyatsala. Iyonke: $ 224,000 exhaswa ngokupheleleyo ngemali mboleko. Ixabiso lentengiso: $ 385,000Total eqikelelweyo yenzuzo ngaphambi kweendleko zokuvala: $ 161,000 (eyi- $ 385,000 - $ 224,000).
Ukusuka eDwayne naseJanet bakha izindlu ezimbini, inzuzo eqikelelweyo esekwe kolu xabiso lweemarike yi- $ 322,000 ($ 161,000 X 2) .Le mzekelo ngumzekelo oqinisekileyo wokuba iNkqubo yethu yeKhredithi yeNkampani isebenze kanjani kuBantu bethu babini abaThengi
Iprojekthi yonke yakwazi ukuthengwa, yakhiwa kwaye ithengisiwe kusetyenziswa ikhredithi yenkampani, ingxelo, ngaphandle kwendlu ngaphandle kweepakethi zikaDwayne kunye noJanet. Umda wetyala wokwakha ugqume zonke iindleko.
Injongo yeli phepha kukunika umzekelo wobomi bokwenyani obuvela kubathengi bethu babini. Iklasi ephilayo okanye iDVD eza noqeqesho lwakho iya kukuxelela iinkcukacha zenyathelo nenyathelo malunga nento ekufuneka uyenzile ukukhulisa inzuzo yenkampani esekholfini ngoncedo lwekhredithi olunikezelwa kwiphakheji yethu.Lungiselela ukusuka ku-Anderson ukuya kwi-CEO ye Iinkampani ezifakwe kwiChristmas Ifoto ukusuka ku-Anderson yoTyelelo loSapho lokuya eDisneyland Ehambisana Neleta engasentla
Uku-odola i-Aged Corpor okanye i-Shelf Corporation ngoqeqesho lokunceda ngetyala, ekubhekiswa kuyo njengezindlu zeshelufu ezinenkqubo yokuthenga ngetyala okanye iishelufu ezinepakeji yokuthenga ngetyala okanye iishelufu ezinemigca yokuthenga ngetyala (imigca ephantsi kolwamkelo lwababolekisi hayi imigca yemali ebolekayo yemali) okanye ulwazi malunga nemibutho emidala enamanqaku abhatalwa emivuzo, nceda tsalela umnxeba 1-888-444-4412,, okanye kwilizwe jikelele kwi + 1-661-253-3303 kwaye uthethe nomnye weengcali zethu eziza kukunceda ngovuyo. Nceda ufowunele uMvulo ukuya ngolwesiHlanu phakathi kweeyure ze-7: 00 AM kunye 5: 00 PM Ixesha lePasifiki.
OBUMNYANGO BENZELWA IINJONGO ZOKUVALWA UMVUZO WOKUQINISEKISA. IZIPHUMO ZAKHO ZINGAVANYO. KULO MZEKELISO WOKUGQIBELA KWIBHAYIBHILE APHA ATHUNYIWEYO ATHENGIWEYO ATHENGA UMNYE WOMNIKI-MALI KWIPROFITI YOKUZIPHATHA KWESIQINISEKILEYO KULO MGAQO-NKQUBO WABO WOKUGQIBELA NOKUVALWA KWENGXENYE EYENZIWEYO. UKUSUKA KULULAZI, UMPROFETI OMKHULU NJENGOKUXELWA KUFANELE ATHATSHELWE OKANYE UKUZE AZE ATHUNYELWE NGUMVANGELI OTHENGISELELWEYO.